प्रचण्डलाई पत्नी सीताको अवस्था कस्तो छ ? प्रचण्डलाई एकान्तमा लगेर कसैले नसुन्ने गरी किन यसो भने चिकित्सकले ? – Gazabkonews
प्रचण्डलाई पत्नी सीताको अवस्था कस्तो छ ? प्रचण्डलाई एकान्तमा लगेर कसैले नसुन्ने गरी किन यसो भने चिकित्सकले ?
काठमाडौं । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएकी पत्नी सीतालाई भेट्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अस्पतालमा पुगेका छन् । प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाललाई बुधवार भैसेपाटी स्थित मेडिसिटी अस्पताल भर्ना गरिएको छ । प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहालले त्यसवारे जानकारी गराएकी छन् ।
दाहाल पाकिन्सन्स्जस्तो जटिल रोग पीएसपी ९प्रोग्रेसिभ सुपरान्यूक्लियर पाल्सी० बाट पीडित छन्। प्रचण्ड परिवारले उनलाई थप उपचारका लागि यसै साता भारत लैजाने तयारी गरिरहेको थियो। दाहालको यसअघि अमेरिका जोन हकिङ्स अस्पताल र सिंगापुरमा उपचार गरिएको थियो।